Semalt - कसरी Google एनालिटिक्स बाट तपाइँको भ्रमण बहिष्कार गर्ने
के तपाईंलाई थाहा छ तथ्या programs्क प्रोग्रामहरू जस्तै गुगल एनालिटिक्सले तपाईंको वेबसाइटमा तपाईंको गतिविधिहरू ट्र्याक गर्दछ जुन तपाईंको तथ्या ?्कलाई सws्केत गर्छ?
इगोर Gamanenko, को ग्राहक सफलता प्रबन्धक Semalt , यहाँ यस सन्दर्भमा केही उपयोगी मुद्दाहरू प्रदान गर्दछ।
यसलाई रोक्नको लागि, तपाईं फिल्टरहरू साइटमा नक्कली र अनावश्यक ट्राफिक नहुन राख्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जब तपाईं आवश्यक फिल्टरहरू लागू गर्नुहुन्छ, तपाईंको तथ्या .्कहरू स्किउड डाटा देखाउँदैन किनकि तपाईंले आफ्नो साइटमा हेर्नुहुने गतिविधिहरू वैध आगन्तुकहरूको वास्तविक ट्राफिक हुनेछ। यी फिल्टरहरूले केवल साइटमा तपाईंको भ्रमणहरू फिल्टर गर्न मद्दत गर्दैन, तर तिनीहरू साइटमा भूत रेफरल स्प्याम र बोट रेफरल स्प्याम सहित स्प्याम पहिचान गर्न पनि सहयोग गर्दछन्।
गुगल एनालिटिक्स प्रयोग गर्दा, तपाईंले प्रयोग गर्नुहुने उपकरणहरूको आईपी ठेगाना पहिचान गर्न आवश्यक छ। नोट गर्नुहोस् कि तपाईंले साइटमा पहुँच गर्नका लागि सबै आईपी ठेगानाहरू पहिचान गर्न आवश्यक पर्दछ। थप रूपमा, ध्यान दिनुहोस् कि आईपी ठेगानाहरू समयको साथ परिवर्तन हुन्छन्, त्यसैले तपाईंले आईपी ठेगानाहरू नियमित रूपमा अनुगमन गर्न आवश्यक पर्दछ र आवश्यक पर्दा फिल्टरहरू अपडेट गर्नुहोस्।
त्यसोभए, तपाइँको भ्रमणहरूलाई वेवास्ता गर्नको लागि IP ठेगाना कसरी पहिचान गर्ने? जबकि त्यहाँ साइटहरू छन् जस्तै तपाईंको ब्राउजरमा तपाईंको आईपी ठेगाना टाइप गर्नु हो, र ठेगाना खोजी परिणामहरूमा प्रदर्शित हुन्छ।
सामान्यतया, परिणामहरूमा प्रदर्शित आईपी यस्तो देखिनेछ: 60.40.210.157। माथिको ढाँचामा प्रदर्शित ठेगाना IPv4 ठेगाना भनेर चिनिन्छ। केहि उदाहरणहरूमा, खोजले निम्न ढाँचामा प्रदर्शित संख्याहरूको भिन्न स्ट्रिंग फिर्ता गर्न सक्छ: २००२: ०db6:a75a5: ००००: ००००: aa4e: ०80०: 3939।।। माथिको ढाँचामा प्रदर्शित ठेगानाहरू IPv6 को रूपमा चिनिन्छन्। यी नयाँ प्रकारका ठेगानाहरू हुन् जुन मानिसहरू सर्दैछन्। यद्यपि दुबै आईपीभी and र आईपीभी Google गुगल एनालाइटिक्समा तपाईंको उपकरणको आईपी ठेगानाहरूलाई फिल्टर आउट गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। एकचोटि तपाईसँग आईपी ठेगाना भएपछि, पाठ सम्पादकमा प्रतिलिपि टाँस्नुहोस् जस्तै TextEdit वा नोटप्याड।
अब जब तपाईसँग एउटा टेक्स्ट एडिटरमा ठेगाना हुन्छ तपाईको गुगल एनालिटिक्स खातामा लग इन गर्नुहोस् र तपाईले फिल्टर बनाउनु भएको साइट छनौट गर्नुहोस्। जब तपाइँ हेडरको प्रशासन लिंकमा क्लिक गर्नुहुन्छ, col स्तम्भहरूको सेट खुल्नेछ। दायाँ-हातको स्तम्भमा, तपाईले लि link्क गरिएको फिल्टर देख्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। जहाँसम्म तपाईं पहिले फिल्टरहरू सिर्जना गर्नुहुन्न, खाली फिल्टरहरूको सूची खुल्नेछ। फिल्टर थप्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
यो सिफारिश गरिएको हो कि तपाईले आफ्नो फिल्टरको नाम राख्नु भएको छ किनकि तपाईसँग धेरै फिल्टरहरू यो समयको साथ हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाई मोबाईल आईपी मा काम गर्नुहुन्छ, तपाई यसलाई होम आईपी ठेगाना नाम दिन सक्नुहुनेछ। फिल्टर प्रकार अन्तर्गत, यसलाई पूर्वनिर्धारित प्रकारमा राख्नुहोस्। फिल्टर ड्रप डाउन मेनू चयन गर्नका लागि मात्र समावेश समावेश गर्नुहोस्।
अर्को, गन्तव्य वा स्रोत चयन गर्न अगाडि बढ्नुहोस्। यो तपाईको यातायात को स्रोत हो। उत्तम परिणामहरूको लागि आईपी ठेगानाहरूबाट ट्राफिक चयन गर्नुहोस्। अब अन्तिम ड्रप डाउन बक्समा जानुहोस् र त्यो बराबर विकल्पको विकल्प छनौट गर्नुहोस्। जब तपाइँ सम्पूर्ण प्रक्रियाको साथ समाप्त हुन्छ, बचत बटन क्लिक गर्नुहोस्। अब, तपाई सूचीमा नयाँ फिल्टर देख्नुहुनेछ।
यदि तपाईंले गुगल एनालिटिक्सबाट तपाईंको भ्रमणहरूलाई हटाउनुभएको हो भनेर पत्ता लगाउन, वास्तविक समय रिपोर्टि toमा जानुहोस् र हेर्नुहोस् यदि तपाईंको आँकडा तथ्या .्कमा देखापर्छ भने। दिमागमा राख्नुहोस् कि भर्खरैका परिवर्तनहरू प्रभाव लिन केहि मिनेट लिन सक्दछ।
यदि तपाईले याद गर्नु भयो कि तपाईको आईपी ठेगाना अझै देखाइएको छ भने तपाईको फिल्टर सेटिंग्स फेरी जाँच गर्नुहोस्। विशेष रूपमा आईपी ठेगानामा यसका सबै नम्बरहरू छन् भनेर निश्चित गर्न डबल जाँच गर्नुहोस् किनकि मानिसहरूले प्रतिलिपि गर्ने र टाँस्ने क्रममा व्यक्तिले एक वा दुई अंकहरू हराउँदछन्। गुगल विश्लेषकले तपाईंको वेबसाइटमा तपाईंको भ्रमणहरू लिइरहेको छ कि भनेर पत्ता लगाउन प्रत्येक केही महिनामा वास्तविक-समय जाँच गर्नुहोस्। यदि गुगलले अझै तपाईंलाई उठाउँदै छ भने, त्यहाँ यस्तो सम्भावना छ कि तपाईंको आईपी परिवर्तन भएको छ, त्यसैले यो नयाँ फिल्टर लागू गर्ने समय हो।